त्यसपछि ५ बर्षिय छोरीको र’गत ब’गिरहेको थियो…. « गोर्खाली खबर डटकम
साथीसँग खेलिरहेकी पाँच वर्षीया बालिकालाई छिमेकी एक किशोरले बो’लाए । चिनजानकै दाइले माया गरेर बोलाएपछि ती बालिका चकलेट पाइने आशा राखेर गइन्। तर उनलाई के थाहा १७ वर्षीय छिमेकी दाइले आफूलाई क’र’णी गर्लान् भन्ने। तिनै छिमेकी दाइ उनका लागि रा’क्षस बने। आमा खेतमा गएका बेला अबोध बालिका आफ्नै घरमा ‘ब ला’त्कृ’त भइन्।
यो घटना साउन ४ गते दिउँसो सिरहा नगरपालिका–१९ सन्हैठाको सोहर्वा टोलमा भएको हो। खेतबाट आएकी आमा घरभित्रै छोरीलाई र’क्ता’म्य देखेपछि आ’त्ति’इन्। छोरी पी’डा’ले स’हन न’सकेर छ’टपटा’इरहेकी थिइन्। उनी ह’तारह’तार छोरीलाई लिएर जिल्ला अस्पताल सिरहा पुगिन्। त्यहाँ डाक्टर नभेटेपछि उनी लहान अस्पताल गइन्। प्रारम्भिक उपचारकै क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरीसमक्ष पीडित बालिकाले घटनाको बयान गरिन्।
विगत तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउँदा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा ब ला’त्कृ’तमध्ये करिब ६० प्रतिशत २५ वर्ष उमेरमुनिका छन्। त्यसमा पनि ११ देखि १५ वर्ष उमेरका धेरै छन्। करणी हुनेमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, निमुखा र दलित समुदायका बढी छन्।
असोज २ गते कर्जन्हा नगरपालिका–३ मा १९ वर्षीया युवती चिनजानकै पुरुषबाट ब ला’त्कृ’त भइन्। रातमा सबै सुतिरहेको मौकामा घरमा पसेर छिमेककै २५ वर्षीय युवकले करणी गरे। किशोरी चि च्याउन थालेपछि मुखमा कपडा को’चेर रा’क्षसी व्य’वहार गरियो। आरोपित फ’रार छन्।
भदौ १ गते धनुषाधाम–९ सय बिघास्थित दिदीको घरमा बिहे भोज खाएर सबैला नगरपालिका–१२ रघुनाथपुरस्थित घर फर्किरहेकी कि’शोरीलाई ‘सा’मू’हिक करणी गरियो। आठजना युवकले आफूलाई ब’न्धक ‘ब’नाएको र त्यसमध्ये चारजनाले क’रणी गरेको बयान किशोरीले प्रहरीमा दिएकी छन्।
यस्तै असोज १३ गते राति करिब ८ बजे महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–९ बस्ने ३५ वर्षीया महिला वडासचिवबाटै ब ला’त्कृ’त भइन्। हटियाबाट घर फर्किरहेकी ती महिला मुसहरी टोलकै सडकमा ब ला’त्कृ’त भएकी थिइन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मिथिलेश यादवले लेखेका छन् ।
यो पनि : परीक्षण गरिएकामध्ये १६ प्रतिशतमा कोेरोना
सङ्क्रमण देखिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८४ हजार ५७० पुगेको र हालसम्म देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २१ हजार ३०२ रहेको जानकारी दिए ।
आमाको मृत्युपछि श वसंग यी दाजुभाइले जे गरे …
कोरोना भाइरस भगाउन भन्दै क्रिश्चियन पास्टरले डिटोल पिलाइदिएपछि…..